चितवनमा ७२ घण्टामा ‘काेराेना विशेष अस्पताल’ तयार, शुक्रबारदेखि अस्पतालको सेवा शुभारम्भ हुने | Samajik Khabar
Home मुख्य चितवनमा ७२ घण्टामा ‘काेराेना विशेष अस्पताल’ तयार, शुक्रबारदेखि अस्पतालको सेवा शुभारम्भ हुने
चितवनमा ७२ घण्टामा ‘काेराेना विशेष अस्पताल’ तयार, शुक्रबारदेखि अस्पतालको सेवा शुभारम्भ हुने
चितवन : भरतपुर महानगरपालिका १० मा रहेको चितवन प्रदर्शनी केन्द्रमा ५० शय्याकाे ‘भरतपुर कोरोना विशेष अस्पताल’ तयार गरिएको छ । अस्पतालको बहिरङ्ग सेवा तथा जनरल वार्ड शुक्रबारदेखि नै सञ्चालनमा आउनेछ । भरतपुर महानगरको अगुवाइमा छोटो अवधिमा नै अस्पतालको लागि आवश्यक उपकरण सहितको संरचना तयार गरिएको हो ।
महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले शुक्रबारदेखि अस्पतालको सेवा शुभारम्भ हुने जानकारी दिनुभयो । अस्पतालमा परिचालन हुने चिकित्सक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) को निर्देशन अनुसार आवश्यक तालिम समेत दिइएको छ ।
अस्पतालमा परिचालन हुने स्वास्थ्यकर्मीलाई शत प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र सुरक्षित पोशाकको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । कोरोनाको आशङ्का भएका बिरामीलाई मात्र यस अस्पतालमा राखिने छ । अस्पतालमा रहने बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक खानादेखि इन्टरनेटसम्मका सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।
महानगरपालिका प्रमुख दाहालकाे संयोजकत्वमा रहेको १५ सदस्यीय कार्यदलले ७२ घण्टामा अस्पताल तयार गरी सञ्चालन गर्न लागेको हो । कार्यदलका प्रवक्ता डा. भोजराज अधिकारीले अस्पताल सञ्चालन गर्न जिल्लाका दुई सरकारी र दुई निजी मेडिकल कलेजबाट आवश्यक शय्या ल्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
अन्य सबै खर्च अहिले भरतपुर महानगरपालिकाले गरिरहेको जनाएको छ । अस्पतालमा छिट्टै १० शय्याकाे सघन उपचार कक्ष र १० शय्याका हाई डिपेन्डेन्ट युनिट (एचडीयू) समेत सञ्चालन गरिँदैछ । यसका लागि काम अघि बढिसकेको प्रमुख डा. अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । अस्पताल सञ्चालनका लागि सात सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ ।
Previous articleशुक्रबारको लागी राष्ट्र बैंकले तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर, डलर अहिलेसम्मकै महँगो
Next articleप्रधानमन्त्री ओलीले आज बेलुका देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने